Madaxweyne Xaaf “Culeeskii badnaa waa naga haray markii aan la heshiinay Dowladda” – Kalfadhi
Axmed Ducaale Galle (Xaaf) ayaa Wareysi uu siiyay Waxa uu kaga hadlay Xaaladda Soomaaliya, gaar ahaan is afgaradkii dhawaan magaalada Garowe ay ku gaarayn Madaxda Maamul Goboleedyada iyo Dowladda dhexe ee Soomaaliya. Madaxweyne Xaaf ayaa sheegay in is afgaradkaasi faa’idooyin badan laga dhaxlay hadii ay sii socotana ay Soomaaliya ka bixi doonto dhibaatooyinka heesta.
Maamulka Puntland ayuu sheegay in uu ka haray culees badan oo ka heestay dhinaca Dhaqaalaha tan iyo markii loo fasaxay lacagtii ka xayirneed tan iyo markii ay is qilaafeen Xaaf iyo Madaxda Dowladda sida uu hadalka u dhigay.
“Kulankii ka dhashay Caleema-saarka Deni waxa uu ahaa mid ay Soomaaliya ku faa’iday Dowladda iyo Maamul Goboleedyada Intuba dan weyn ayaa ugu jirtay” ayuu yiri Madaxweynaha Maamulka Galmudug Axmed Ducaale Geelle oo Wareysi kooban siiyay Kalfadhi.
“Waxaa naga xayirneed lacagtii ay Galmudug xaqa u laheyd taas oo saameen ku yeelatay Khilaafka dhaxdeyna ah balse markii aan heshiinay waxaa noola fasaxay lacagtii oo baahi weyn loo qabay” ayuu Kalfadhi u sheegay Madaxweynaha Galmudug Axmed Ducaal.
Dhinaca Kale Madaxweynaha Maamulka Galmudug waxa uu beeniyay in uu jiro Khilaaf u dhaxeeya Madaxda Galmudug, waxa uu mas’uuliyiin hore ku tilmaamay Madaxweyne ku xigeenkiisa iyo Guddoomiyaha Baarlamaanka ee saldhigga ka dhigtay magaalada Cadaado ee Gobolka Galgaduud.
“Warbaahintu waxa ay buun buunisaa warar aan Galmudug ka jirin, ma jirto wax khilaaf ah oo u dhaxeeya hogaanka Galmudug waxaan kuwada suganahay Dhuusamareeb, kuwa Cadaado jooga oo aad sheegeyso waa madaxdii hore ee Galmudug” ayuu yiri asaga oo hadalkiisa sii wata Madaxweyne Xaaf.
Kulanka dhowaan ka dhici doono magaalada Garowe ee Xarunta Maamulka Puntland kaas oo ah kulan ay ku balameen Madaxweynaha Soomaaliya iyo kuwa Maamul Goboleedyada ayuu rajo wanaagsan ka muujiyay in is faham fiican uu ka soo bixi doono. “Kulanka dhici doono bisha 3aad ee sanadkaan waxaan ka qabnaa rajo wanaagsan oo ah is faham iyo wada shaqayn dhaxmarta mas’uuliyiinta Qaranka” ayuu hadalkiisa ku soo gaba-gabeeyay Madaxweynaha Maamulka Galmudug Axmed Ducaal Geelle (Xaaf).
Bartamaha bisha 3aad ee sanadkaan ayaa loo balamay in magaalada Garowe ee Xarunta Maamulka Puntland kulan ku qaatay Madaxweynaha Soomaaliya iyo Madaxda Maamul Goboleedyada kuwaas oo aan wada shaqayn ka dhaxeynin mudo ku dhow hal sano. Kulankii kii horeeyay oo is Afgarad lagu gaaray ayaa ka dhacay isla Magaalada Garowe ee Maamulka Puntland.